LONDON (Reuters) - Aston Villa yakarova Liverpool diki-diki padivi 5-0 ne yakapetwa naJonathan Kodjia achivabatsira kupinda mumakwikwi eFainari yeNdebe usiku husina kujairika kuVillage Park neChipiri.
Vatungamiriri vakatiza vePremier League vakatamba muFIFA yeKlabhu Yenyika Chero maawa makumi maviri nemaviri gare gare muDoha, vakanongedza mutsara wekutanga unosanganisira vekuchengetera uye vatambi vechikwata chevechidiki vane zera remakore gumi nemashanu, rekodhi rekirabhu.
Pavaizvibvumidza kuenda kune imwe nzvimbo yaive neruzivo rweVillage yaive neruzivo, iyo yakaratidza shanduko gumi kubva pasvondo yePremier League yakakundwa naSheffield United, vakadzidziswa chidzidzo chakasimba mukukunda kweLiverpool kwakanyanya kukunda mukombe weLondon.
Vatambi vetsiva veMerseyside club nemaneja, Juergen Klopp, vachiona paTV muQatar mavakatarisana naMonterrey mumisangano neChitatu, vangadai vakafadzwa nemafambisirwo akaitwa timu yavo naHarvey Elliott ane makore gumi nematanhatu.
Asi Villa yakatungamira mumaminetsi gumi nemana apo Conor Hourihane's free kick yakafamba munzvimbo ine vanhu vazhinji uye vachipinda mumambure neKakutjia pakutanga vachiti kubata.
Morgan Boyes, mumwe wevashanu veLiverpool vatanga kuenda, akabvisa kusununguka kwaAlma Elmohamady pamusoro pemuchengeti wake Caoimhin Kelleher mushure memaminitsi matatu mushure memakore makumi matatu Kodjan Kodjia akamhanyisa pamusoro pake ari ega kuti aturike kumba chinangwa chechitatu mumakumi matatu nematanhatu.
Mumiriri weVillagean Ivory Coast, Kodjia akaita kuti iitwe 4-0 kubva padhuze nguva isati yapera kuti apedze tauro semakwikwi, kunyangwe Liverpool yakaunza mikana mikana yakawanda mushure mekatambi nekutamba kwakanaka kwekutamba.
Villa yakawedzera chinangwa chechishanu mukumira nguva nerekodhi kusaina Wesley achipedza kliniki, akatumirwa zvakajeka naTrezeguet mushure mekubva kubhenji.
Villa yasvika kuma semi fainari kekutanga kubvira mumwaka wa2012-13 asi kukunda kwacho kwakanzwika zvisingaite.
Liverpool yakunda mukombe weLigi rekodhi kanokwana kasere asi vakarega mukana wekuzviita vapfumbamwe sezvo vakatarisa kumutambo muDoha uchirwa neMexico kirabhu Monterrey.
Mibvunzo ichabvunzwa pamusoro pechisarudzo chavo chekusashanda vatambi vakuru uye kurongeka kwacho asi kunyangwe mutsetse weLiverpool waive nemapfuti akawanda uye ane zvakawanda kupfuura Villa.
Maneja weLiverpool-Under-23 Neil Critchley, achitungamira timu mukushayikwa kwaKlopp, akati vatambi vake, avo vanga vaine vatambi gumi nevatanhatu vekutanga pakati pavo, vaive vakanaka.
"Isu takafararira kubvira pakutanga, taive nemikana mishoma kubva pakuridza muridzo," akadaro.
"Isu takanga takashata kubvuma uye kuzviwana tave 2-0 pasi. Hwaive husiku chaihwo uye hapana munhu waaida kuti hupere. Tsigiro yataive nayo yaisatenda.
“Vamwe vacho vakaratidza kugona kuzotitamba, kana muPremier League. Vanozoziva kuti yaingova chikamu cherwendo rwavo. Manzwiro angu andaingoita ekudada kukuru. ”
Mamwe mafainari matatu fainari anoitika neChitatu akabata matatu City Oxford United, Manchester United inotamba yechina-Colombia United neOverton kumba kuLeicester City.